ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၌ တည်ငြိမ်မှုရှိရန် အီဂျစ်တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ် ၁၆ ရက်တွင် လဘနွန်နိုင်ငံ၊ ဘေရွတ်မြို့၌ ကင်းလှည့်နေသော လက်ဘနွန်စစ်သားတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကိုင်ရို၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၌ ယမန်နေ့အစောပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသေစေသော ပစ်ခတ်မှုအပေါ် အီဂျစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် လွန်စွာစိုးရိမ်မိကြောင်း အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိစေရန် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း အီဂျစ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက က ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုအားရှောင်ကြဉ်ရန်၊ လက်ဘနွန်၏ မြင့်မားသောအကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေး၍ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဥပဒေအားလိုက်နာရန် နှင့် ဥပဒေသည်နိုင်ငံ ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် လုံးခြုံရေးအား ကာကွယ်ပေးကြောင်း၊ လူများ၏မူလအခြေအနေအားထိန်းသိမ်း၍ ဆိုးဝါးသည့် အကျပ်အတည်းသံသရာမှ ရုန်းထွက်ရန် အီဂျစ်အနေဖြင့် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ahmed Hafez ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဘေရွတ်မြို့၌ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ ၆ ဦး သေဆုံးပြီး ၃၀ ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလက်ဘနွန်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၏အဆိုအရသိရသည်။
ဟစ်ဇဘိုလာ နှင့် Amal တို့ကလက်ဘနွန်တပ်ဖွဲ့များ (LF) အားပစ်ခတ်မှု၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သော်လည်း LF ခေါင်းဆောင် Samir Geagea ကစွဲချက်ကိုငြင်းဆိုခဲ့ပြီးပစ်ခတ်မှုကိုရှုတ်ချခဲ့သည်။
လက်ဘနွန်အစိုးရနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရာမှာ၎င်းတို့၏ တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရန်၊ အကျပ်အတည်းများကို ဖြေရှင်းပြီးတည်ငြိမ်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် လက်ဘနွန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဆီရှေ့ဆက်နိုင်စေရန် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ လက်ဘနွန်အား ကူညီမှုပေးရန် အီဂျစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ (Xinhua)
CAIRO, Oct. 14 (Xinhua) — Egypt expressed on Thursday its “great concern” over the deadly shooting that took place in Lebanon earlier in the day, urging all Lebanese parties to maintain calm and self-restraint, according toastatement by the Egyptian Foreign Ministry.
Egypt called on the Lebanese to refrain from violence, prioritize Lebanon’s higher interests and stick to the constitution and the law “inamanner that protects the country’s stability and security, preserves the resources of its people and takes them out of the cycle of vicious crises,” said the ministry’s spokesman Ahmed Hafez in the statement.
Earlier on Thursday, at least six people were killed and more than 30 others wounded inashooting in Lebanon’s capital Beirut, according to the Lebanese Red Cross.
The Egyptian Foreign Ministry urged the Lebanese government and institutions to assume their responsibilities in running the country, resolving its crises and restoring stability “so that the international community can help Lebanon move forward towardabetter future.” Enditem